I-SACP ithi ngeke imeseke uZuma enkantolo | News24
I-SACP ithi ngeke imeseke uZuma enkantolo
Johannesburg - Umholi weSACP uBlade Nzimande uthi lenhlangano ngeke imeseke lowo owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma uma eyovela enkantolo ngamacala enkohlakalo ngoLwesihlanu.
UNzimande uthi sekuyiskhathi sokuthi uZuma ayoziphendulela ngamacala akhe enkohlakalo kanye nawokushushumbisa imali.
"Ngeke, siyi-SACP sicabanga ukuthi kubalulekile ukuba sizihloniphe izinkantolo. Izinkantolo yilapho okuqulwa khona amacala ngakhoke kumele sihambisane nemigomo yawo, futhi ngeke sibe ngisho ngaphandle kwasenkantolo,"kusho uNzimande ekhuluma esithangamini sabezindaba ngaphandle kwekhaya likaMadikizela Mandela.
UZuma kulindeleke ukuba avele eNkantolo eNkulu yaseThekwini ngoLwesihlanu eyobhekana namacala angu-16 enkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokushushumbisa imali.
OLUNYE UDABA: Asenkantolo amadoda abhekene nawokubulala izingane eMpumalanga
INhloko yeNPA uShaun Abrahams wathatha isinqumo sokuba kuqhutshekwe nokuqulwa kwamacala kaZuma.
Ngokwedlule, iSACP ikakhulukazi uNzimande babemeseka uZuma ngesikhathi kusaqulwa lawa macala ngo-2008.
Kulokhu, uNzimande uthi itshe ligaya ngomunye umhlathi, kubika iPolitical Bureau.
Ungqogqoshe wamaphoyisa uBheki wexwayise lowo owayengumengameli wezwe uJacob Zuma kanye nabalandeli bakhe ngokuthi kabahlukane nokumema noma ukuhlanganisa izinhlaka ze-ANC ukuba zimeseke uma eseyovela enkantolo ngamacala enkohlakalo.
NgoLwesihlanu, uZuma uzovela okokuqala eNkantolo eNkulu eThekwini nokuyilapho ezophinde athweswe khona kabusha amacala enkohlakalo ngesikhathi kuthengwa izikhali.
“Akekho umuntu okungeyakhe i-ANC. Uma wenza amacala kumele ubhekane nawo ngaphandle kokubiza i-ANC ukuba ikuvikele sengathi wawutshontshela yona, ekubeni wawuzenzela wena nezingane zakho,” kusho uCele.